Wararka Maanta: Sabti, July 3 , 2021-General Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho
Janaraalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, halkaas oo ugu dambayn uu saakay ku geeriyooday, waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyay madaxda Soomaalida.
General subxaanyo, Waxa uu ku dhashay magaalada Baladweyne, sanadkii 1952dii. Sanadkii 1972, ayuu galay kuliyadda millateriga ee General Daud millatery academy oo ku taallay magaalada kismaayo, Kadibna wuxuu aaday 1974 dalki midowga soofiyeeti oo uu kasoo dhigtay kuliyadda milatiriga ee linin ee Moskow oo lagu barto siyaasadda iyo millateriga.
Dhamaadkii dagaalka 77kii waxaa loo diray dalka Germany oo uu ku maqnaa 78kii ilaa 84kii oo uu soo qaatay shahaadada Mechanical Engineering, jaamacadda Rostok ee Germany.
1985 ayuu dalka kusoo noqday, waxa uuna jagooyin kala duwan ka soo qabtay ciidanka Asluubta, waxa uu madax ka noqday hogaanka siyaasada ee ciidanka asluubta iyo kan gaadiidka iyo isgaarsiinta.
Kadib burburki Dalka, jananku waxa uu la shaqeeyay hay'ado samafal, sidoo kale waxa uu madax ka noqday gudigii Culaysaarka(Pressure Group) oo Shaqadoodu ahayd dhaxdhaxaadinta hogaamiyayaashii koonfurta soomaaliya.
Raysal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid allaha u naxariistee, General Cabdulqadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ahaa ruug caddaa ciidan.
Raysal wasaare Rooble ayaa sheegay general Subxaanyo inuu ahaa waayo arag dalka iyo dadka ugu soo shaqeeyay si daacadnimo iyo geesinimo leh. Wuxuu geeridiisa uga tacsiyeeyay qoyskiisa iyo Qaranka Soomaaliyeed.
“Naxariistii Janno Allaha ka waraabiyo General Cabdulqadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ahaa ruug caddaa ciidan iyo waayo arag dalka iyo dadka ugu soo shaqeeyay si daacadnimo iyo geesinimo leh. Waxaan geeridiisa uga tacsiyeynayaa qoyskiisa iyo Qaranka Soomaaliyeed,” ayuu yiri raysal wasaaraha.
Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, ayaa isagana ka tacsiyeeyay geerida Gen. Subxaanyo. Wuxuu sheegay inuu ahaa sarkaal magac iyo maamuusba ku dhex lahaa bulshada reer Galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya.